Lohahevitra:9 Dropshipping Business Name Mistakes to Avoid
Ahoana no Dropshipping Works
LAHARAM-PAHAMEHANA, Ny Dropshipping Business Name
Nahoana no zava-dehibe ny Hamarino Tsara
5 Vokatry ny Fahazoana Mety ve
5 Quick Fomba hiteraka Dropshipping Business Name Ideas
9 Dropshipping Business fanomezana anarana fahadisoana mba Aza
Mifidy ny anarana raharaham-barotra ho an'ny dropshipping dia kely fivarotana hafa noho ny raharaham-barotra nifidy anarana ho an'ny hafa karazana raharaham-barotra. Na izany aza, toy izany koa mampihatra ireo fitsipika, raha mahazo fanomezana anarana raharaham-barotra ratsy maro ny zavatra hafa dia afaka mandeha tena diso. Izany no ho toy ny olana.
Misy be ny raharaham-barotra avy any dropshipping, 500,000 (ary manisa) amin'ny Shopify irery niely manerana 175 firenena. Ny fivarotana na anaranao afaka mijoro anareo nivoaka avy amin'ny vahoaka sy ny toerana dropshipping anao fahombiazana na mifangaro ho any amin'ny fototra izay faty an-drano amin'ny invisibility.
Soa ihany, misy mahay fomba hisorohana izany honahona sy mianatra mba dropshipping fivarotana na fanomezana anarana raharaham-barotra tsara.
Satria izany dia mora ny manomboka dropshipping, dropshippers manana fironana hanary ny tsy manao fivarotana sy hanokatra iray hafa, fa raha mifanaja anefa no modely fanomezana anarana ny raharaham-barotra, dia mila mianatra ny fomba tsara hiteraka anarana raharaham-barotra hevitra noho ny ho avy dropshipping fivarotana.
Ao amin'ity lahatsoratra ity isika dia hijery ny ins sy outs ny mifidy ny anarana raharaham-barotra ho an'ny orinasa dropshipping, fa aloha
Dropshipping dia ecommerce famatsiana raharaha modely izay mamela anao no Varotra tsy mila hividy tahiry ara-batana, na hitandrina lisitra.
Eto ambany ny famaritana fohy ny dropshipping in 5 mora ny dingana:
Maneho ianao mpanamboatra na ny mpamatsy vokatra amin'ny tranonkala antsinjarany amin'ny fanamarihana,
Mpiantsena mijery sy ny toerana didy aminao
Ianao maka ny tombom-barotra, ary
Forward mpanjifa baiko ny mpamatsy na mpanamboatra, izay
Tanteraho na hanolotra vokatra mivantana ny mpanjifa
LAHARAM-PAHAMEHANA: Ny Dropshipping Business Name
Misy zavatra vitsivitsy ianao no mila manomboka dropshipping toy ny:
PC na laptop
Azo Itokisana connection Internet
Dropshipping Platform, e.g. Shopify (avy amin'ny sehatra anarana, sns), maimaim-poana 14 ny andro fitsarana, Manomboka amin'ny $ 29 / mo, $9/mo for Shopify Lite
Ny vokatra na ny akany
Azo antoka mpamatsy na mpanamboatra
An automatique App toy ny Oberlo, (maimaim-poana starterDouble entana), dia $ 29 / mo for fototra fonosana, sns
fa, iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra tokony raharaham-barotra dia tsara noho ny dropshipping anarana fivarotana.
Araka ny voalaza teo aloha, dia afaka manomboka amin'ny ara-bakiteny dropshipping aotra dolara. Noho izany zavatra sasany nalaina ho toy ny fanomezana.
Mihevitra ho manana ho anao sy mitsambikina mihoatra mitombo haingana ary mahazo tsara ny mpilalao lehibe izay trademarked anarana mialoha daty sy mitovy anao, Mety ho ianao ao ho ara-dalàna tussle, ka lasa sarotra kokoa ny hamela ny raharaham-barotra mitombo noho ny raharaham-barotra mifandraika amin'ny olana anarana.
Noho izany dia mila mahazo izany marina avy ny nanombohan'ny. Mba hanipy fahazavana misimisy kokoa,
Ady ara-dalàna izay mety hanimba ny raharaham-barotra, na vidin'izany betsaka anao amin'ny ponenana
Very ny mpanjifa fototra
Very ny haino aman-jery sosialy mifandray amin'izany pejy sy ny kaonty
Fanavaozana ny zavatra rehetra fananan'ny nomerika hisaintsaina sata vaovao
Lafo rebranding ezaka
Mba nataony tao fomba fijery, tatitra milaza fa tolo-kevitra ny fiovana ny anarany Uta ho TDU (nanonona t-duh) ka hamoy Utah mpandoa hetra eo amin'ny $ 50m hampiharana.
Toy izany koa, ny sehatra cars.com dia voalaza namidy ho whopping $ 872m.
Rehefa avy nilaza fa,
Ary fantatrao fa zava-dehibe ny mahazo ny raharaham-barotra dropshipping anaranao tsara, eto dia 5 fomba haingana mba hamoronana tsara tarehy raharaham-barotra na orinasa anarana hevitra:
Business Name famokarana
Ny anaran'ny raharaha gropy toy ny anarana midika dia rindrankajy na an-tserasera fitaovana izay manampy anao hiteraka anarana raharaham-barotra hevitra noho ny fivarotana dropshipping, ka tsy maintsy manao izany tanana.
Quora dia malaza Q&A Forum izay mpikambana mpikambana manontany fanontaniana sy hahazo valin-misy foto-kevitra. Misy endri-javatra iray upvote izay mamela ny mpikambana hafa ankihibe na ny fanohanana ny valiny nomen'ny mpikambana. Afaka manampy amin'ny hevitra noho ny dropshipping fivarotana.
Fianakaviany sy ny namany
Raha mikasa ny mihazakazaka ny Neny n 'Pop fomba fivarotana dropshipping, nahazo anarana raharaham-barotra soso-kevitra avy amin'ny namana sy ny fianakaviana dia fomba mahafinaritra hanombohana avy.
Afaka tena miafara amin'ny tena mahafinaritra mamaritra anarana fohy ny dropshipping raharaham-barotra.
vahoaka eny ifotony
Away avy amin'ny fianakaviany sy ny namany, vahoaka eny ifotony dia mamela anao loharano ho an'ny orinasa anarana hevitra avy amin'ny vahoaka ny manan-talenta freelancers ho saran'ny.
Maro ny toerana toy izany toy ny CrowdSpring, Fiverr, Upwork, sns.
Safidy iray hafa dia ny hanakarama mahay copywriters raharaham-barotra na ny sampan-draharaha izay mety mahatakatra ny raharaham-barotra sy ny tanjona sy zava-kendrena asa tanana raharaham-barotra mifandraika anarana mifanaraka.
Ary izay efa nahita fomba mba hiteraka raharaham-barotra anarana,
9 Dropshipping Business fanomezana anarana Fahadisoana mba Aza amin'ny Cost Rehetra
Mifidy ny anarana izay toa Amazon
Eny, fantatsika rehetra Amazon no tena olana, fanelingelenana lehibe mitondra ny antsinjarany sy mitelina efa ho ny zava-drehetra amin'ny lalana.
Fa mampiasa anarana amin'ny Amazon ao dia mety ho sady mamitaka izy ireo no ifoteran'izany avy amin'ny lafiny samihafa toy ny tena Amazon, -tserasera mpiantsena sy ny lalàna.
Anisan'izany ny Teny Dropshipping tamin'ny anaranao
Misy fomba fijery ankapobeny izay dropshipped vidin'izany vokatra bebe kokoa amin'ny eo ho eo. Izany dia noho ny ankamaroany ny mividy amin'ny vidiny sy ny antsinjarany dia be izay mahatonga azy io ho an'ny dropshippers sarotra ny hivarotra tsy misy fanamarihana.
Manampy ny teny dropshipping (na ny hafa fiovana) ny raharaham-barotra dia afaka mandefa ny anaranao famantarana diso momba ny vidin AB initio.
Mampiasa Geo-faneriterena Anarana
Ny fampiasana anarana toy ny DropshipTexas no miteraka ny fahatsapana fa ianao ihany no miasa ao, na hamonjy any Texas. Izany dia mety ho mpanjifa fiara izay tsy miaina ao, na ny manodidina Texas.
Dropshipping mamela mivarotra manerantany mba tsy hamatotra ny tanana amin'ny ara-jeografia hentitra anarana.
Fanomezana anarana ny Store Taorian'ny akany
Ny sasany dia Ultra dropshipping niches vanim-potoana, eto izao fotoana izao, ary lasa manaraka. Fanomezana anarana ny dropshipping fivarotana rehefa niches toy izany dia tena mametra, ary fahadisoana lehibe mihitsy mba tsy vidiny.
Ny laza tsara dia tokony hamela anao hanandrana hafa dropshipped niches ny vokatra tsy mila manova anarana fivarotana matetika.
Mifidy Anarana Amin'ny Manomboka kely fisainana
Izany no mitovy amin'ny akany-fanomezana anarana. Noho ny dropshipping ny ambany startup renivohitra, dropshippers sasany hifidy ny orinasa anarana amin'ny fanaintainana "kely" toe-tsaina fandraharahana.
Noho izany, rehefa tonga izy ireo fitomboana mety mila fiovana anarana izay avy sy ny zava-tsarotra.
Mampiasa Anarana mampiavaka ny ny tenim-paritra
Mampiasa anarana hafahafa ny foko, ny olona samy hafa fiteny na dia mety tsy ho ny tsara indrindra noho ny raharaham-barotra dropshipping.
Raha toa tsy maintsy miteny sy tsipelina ny anarana ho an'ny olona isaky ny, izany ary azo inoana fa tsy hampangatsiaka ampy.
Tsipelina sarotra ny Dropshipping Store Name
Raha mioty anarana miavaka ny tenim-paritra hafa fanamby ho mora ny tsipelina na teny ho an'ny tsy-tompon'ny teny ny tenim-paritra.
Mety hoe tsy miseho ao amin'ny valin'ny fikarohana sy ny fifamoivoizana organika izay ianao no mila manampy hitombo ny fivarotana.
Tsy niraharaha ianao Mpanjifa iraisam-pirenena
Satria dropshipping dia mamela anao sy mahazo mivarotra eran fifanakalozana vahiny, tokony handinika ny mpanjifa any amin'ny firenen-kafa sy ny kolontsaina.
Izany raitra anarana raharaham-barotra mety hidika hoe "volamena" ao amin'ny tenim-paritra sy ny hoe "diky" amin'ny fiteny, izay midika hoe mankahala-dry zareo ny fivarotana. Toy izany koa ny fikarohana.
Mpamatsy Misspell ny Name amin'ny faktiora na Product fonosana hafa
Raha ny anaran 'ny dropshipping fivarotana sarotra ny tsipelina, Mety misspell mpamatsy azy amin'ny faktiora na ny vokatra fonosana, izay ratsy ho an'ny marika roa vokatra avy amin'ny mpamatsy roa mety tsipelina ny anaranao amin'ny fomba hafa.
Mety ho very mpanjifa ny fitokisany raha mamerina foana. Antoka ny raharaha marina anarany nanaiky ny mpamatsy.
Nahazo ny dropshipping raharaha anaranao tsara hamonjy anao tsy ilaina ny adin-tsaina sy manahy. Araho ireo toro-hevitra mba hiteraka anarana raharaham-barotra tsara kokoa ny foto-kevitra manaraka.
Amos Onwukwe dia AWAI fiofanana Ecommerce B2B / B2C Copywriter nasongadina tao eCommerce Insights, Ecommerce Nation, Ecommerce hahazoana hevi-javatra, SmallBizCub, mahomby Startup 101, Moana Little Man, Huffington Post, Floship, vokany Voalohany, The Next Scoop, SABTrends, BusinessTips.Ph hilaza vitsivitsy.
Izy dia azo karamako
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "9 Dropshipping Business Name Fahadisoana mba Aza amin'ny Cost Rehetra"